Information for Myanmar about Islam: ဘင်္ဂလီ ဘယ်သူလဲ?
ဘင်္ဂလီ ဘယ်သူလဲ့၊ Who is Bengali? Buddha လည်း ဘင်္ဂလီ
1) Collin Dictionary အရ
၁) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (သို့) အိန္ဒီယပိုင် အနောက်ဘင်္ဂလားနယ်တွင် အဓိက နေထိုင်သော လူမျိုးစုကို ဘင်္ဂလီဟုခေါ်သည်။ အနောက် ဘင်္ဂလားတွင် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အဓိက နေထိုင်ပြီး အရှေ့ဘင်္ဂလား နှင့် ဘင်္ဂလားဒေရ်ှတွင် မူစလင်များ အဓိက နေထိုင်သည်။
၂) ဘင်္ဂလားတွင် မွေးဖွားသူ (သို့) ဘင်္ဂလားတွင် နေထိုင်သူ။
၃) ဘင်္ဂလားတွင် အင်ဒိုအာရီယန် စကားကိုပြောကြသည်။
2) Oxford Dictionary အရ
၁) ဘင်္ဂလားတွင် မွေးဖွားသူကို ဘင်္ဂလီဟုခေါ်သည်။
3) Merriam Webster Dictionary အရ
ဘင်္ဂလားဒေရှ် (သို့) အိန္ဒီယပိုင် အနောက်ဘင်္ဂလား တွင် မွေးဖွားသူ (သို့) နေထိုင်သူကို ဘင်္ဂလီဟုခေါ်သည်။
Buddha Gautama ၏ မိခင်ဘာသာ စကားမှာ Magadhi Prakit ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ မွေးဖွားရာ Magdha နယ်သည် အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်း Rajagraha (ရာဇင်္ဂြိုဟ်), Patali Putra (ပါတလီ ပုတ္တရာ), Bihar, Nepal နှင့် ဘင်္ဂလားဒေရှ် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး BC 558 မှ BC491 အထိ Bimbisara (ဗိမ္ဘိသာရ) နှင့် ၄င်းကို ဆက်ခံသူ Ajatashatru (အာဇာတရှတ္တရူ) တို့ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဦးနှောက် မိုင်းတိုက်ခံရပြီး မသိနားမလည်းသော ငနွားများနှင့် သိသိနဲ့လိမ်နေသော လူလိမ်များက အစ္စလာမ်ဘာသာ မှန်လျင် ခိုးဝင် ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂလီ ပုတီးစိပ်နေကြသည်။ အမှန်မှာ ဗုဒ္ဓကို တမ်းတခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မူရင်းတင်သူအား Credit ပေးပါသည်။
Posted by A Muslim at 7:18 AM
ကျောခိုင်းလိုက်ရသော မြန်မာပြည် (ဘာသာပြန် သတင်းဆောင...